वर्षमान पुन दम्पतीको बैङ्कक कनेक्सन ,दुर संचारका साधारण कर्मचारी जेनी शाक्य लिएर किन उडे बैङ्कक ? – Himalitimes
वर्षमान पुन दम्पतीको बैङ्कक कनेक्सन ,दुर संचारका साधारण कर्मचारी जेनी शाक्य लिएर किन उडे बैङ्कक ?
| प्रकाशित मितिः बिहिबार, भदौ १२, २०७६
काठमाडौ । करिव छ देखि सात बर्ष अगाडि ललितपुर स्थित ललित मण्डप ट्राभल एजेन्सिमा व्यापक घोटला भए पछि संचालक सुरज शाक्य झिटीघुम्टा बोकेर नेपालबाट पलायन भए । उनी कहाँ गए कसैलाई पत्तै भएन। उनीबाट आर्थिकमा पिडीतहरूले सुरज शाक्यको ब्यापक खोजी गर्न थाले ,कहाँ गए कसैले भेउ पाउन सकेनन् । पैसा असुल्नेले सुरज शाक्य हराए पछि पैसाको माया मार्न थाले । तर करिव सात बर्ष पछि उनी टुप्लुक्क बर्षमान पुन र बर्षमानको श्रीमतीसँग टुप्लुक्क थाइल्यान्डको राजधानी बैंकक झुल्किए ।
आज बर्षमान पुन ,उनका श्रीमती र सुरज शाक्यको श्रीमती जेनी शाक्यसँग काठमाडौंबाट उडान भरेर बैंकक आईपुगेका छन् । जेनी शाक्य नेपाल टेलिकमको साधाहरण कर्मचारी हुन् । उनी कुन हैसियतले आफ्नो श्रीमान सुरज शाक्य जो नेपालबाट भुमिगत भएर ब्याङ्ककमा ललीत ट्राभल्सकै नामबाट व्यापार गरेर बसेका छन् उनलाई भेट्न आईरहन्छन् । विशेष सुत्र अनुरूप सुरज अहिले व्याङ्ककमा बसेर सुन र हुण्डीको व्यापार गरेर बसिरहेका छन् ।
जेनी शाक्य आफ्नो श्रीमान भेट्न बर्षको चार पाँच पटक आईरहन्छन् र व्याङ्ककबाट नेपाल व्यापार पनि गरि रहन्छन् । तर एउटा साधाहरण कर्मचारी कुन हैसियतले बर्षमा त्यत्रो छुट्टी मिलाउन सफल हुन्छिन र कसरी जति पटक आए पनि ब्यापारको सामान नेपाल लान सफल भईरहन्छन् ? सुनिनमा आएको श्रीमती जेनीको ठूलो नेताहरूसँगको उठबसले गर्दा उनका श्रीमान छ सात महिना अगाडि करिव सात बर्ष पछि नेपाल जान सफल भएका थिए ।
भोलि बर्षमान पुन उनका श्रीमती तथा सुरज शाक्य र उनका श्रीमती सिङ्कापुर उड्दैछन् । त्यहाँ राजनितीक उपचार गर्न बसेका देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर केही भलाकुसारी गर्ने नै छन् । भेट पश्चात् पुन दम्पती बाली प्रस्थान गर्दैछन् भने शाक्य दम्पती ब्याङ्कक फर्किने योजना छ । जे होस् देशका बिरामी प्रधानमन्त्री भेट्न व्याङ्कक कनेक्सनले केही ओखती मुलक गर्ला भन्ने जनताले आश गरेका छन् ।
प्रकाशित मितिः बिहिबार, भदौ १२, २०७६ 9:53:00 PM |
Prevयातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका निमित्त कार्यालय प्रमुखसहित ३ जना घुससहित पक्राउ
Nextकटकुवा जंगलमा दर्जन बढी गाईहरु मृत भेटिए,कोही अर्ध मृत अबस्थामा छटपटाउदै,प्रशासन मौन !